Kutheni abantu bebhala iiNgcaciso ze-Intanethi? | Martech Zone
Ukuba awucingi ukuba uphononongo olwenziwa kwi-Intanethi yinto enkulu… jonga nje umxhasi wethu, uluhlu luka-Angie, ngoku inkampani yoluntu esekwe kugcino lwedatha enkulu kakhulu uphononongo oluthembekileyo. Kwaye inyani yokuba bengavumeli uphononongo olungaziwayo okanye uphononongo ngamalungu angahlawulanga kugcina iitrolls kunye nabakhohlisi ngamava amangalisayo. Abathengi babo bayabathanda… buza nje kubo.
Mva nje, kubonakala ngathi abathengi abaninzi bayathontelana ukuya kwiindawo zokuphononongwa kwi-Intanethi, iiforamu kunye neeapps ukuba babelane ngezimvo zabo malunga neenkonzo abaye bazifumana. Kodwa njengoko kuvela, ayinguye wonke umntu oqhutywa ngamanqaku okanye simahla.
Ukuba uyinkampani, ngakumbi eyasekhaya, kwaye awujongi igama lakho kwi-Intanethi ngojongwa- inokuthi ichaze okuninzi. Ukuba unengxaki yokujonga kwakhona, baya kurhuqa ukuthengisa kwakho. Abathengi bathanda uphononongo kwaye bazisebenzisele ukwenza izigqibo zokuthenga yonke imihla. Eyakho uphononongo akufuneki lube lolugqibeleleyo, kodwa kufuneka zithembeke kwaye zibhalwe kakuhle. Ukuba unezirhabaxa ezingameleli iimveliso zakho okanye iinkonzo kakuhle, uya kufuna ukuya emsebenzini uzicele kubathengi abakuthandayo.
Nazi ezinye izibalo ezinkulu ezivela koku infographic evela kwi-Demandforce kuhlolo:
tags: abasebenziUphengululo lwe-IntanethiReviews
I-SocialBridge: I-Suite yokuBambisana kwi-Intanethi yeeArhente
UValerie Joy Deveza
Juni 18, 2012 ngo-9: 31 PM
Ukuphononongwa kwi-Intanethi yindlela eqinisekileyo yomlilo yokubuyisa iinkampani kumnyango wokuzoba kwaye ziphinde zivavanye iindlela zazo zokuthengisa. Jonga ukuba yintoni esebenzayo, kwaye ubone ukuba yeyiphi engasebenziyo. Ndicinga ukuba abantu bayatsaleleka ekubhaleni uphononongo lwe-Intanethi kuba siyathanda ukwabelana nantoni na elungileyo esisandula ukuhlangana nayo, okanye sifuna nje ukubalumkisa abanye ukuba kukho into embi. Ihlala ibuyela emva kunye neemfuno zabantu zokudibanisa nokwabelana.